अटिजम् बारे अभिमुखिकरण तालिम « Kathmandu Television HD
अटिजम् बारे अभिमुखिकरण तालिम
काठमाण्डौं । अटिजम् बच्चाले जन्मजात लिएर आउने एक विशेष प्रकारको अपाङ्गता हो । यसलाई मस्तिष्क विकासको विकार अथवा “Neuro development disorder” भनिन्छ । यो विकार जो कोही बच्चालाई पनि हुन सक्ने र यसको प्रमुख कारण अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन् । र, यसको निदान हालसम्म गर्न नसकिरहेको परिवेशमा नेपालमा पनि यस्ता बालबालिकाको संख्या निकै बढ्दै गईरहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रायःजसो बालबालिकाका लागि अभिभावकले राम्रो स्याहार गर्ने विद्यालयको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । विशेष गरि मन्टेश्वरी प्रिस्कूलमा भर्ना गर्न ल्याउने गरेको पाइन्छ । मन्टेश्वरी विद्यालयमा प्रयोगात्मक शिक्षा प्रणाली भएतापनि यस्ता बालबालिकाको वारेमा अनविज्ञ भएकाले कतिपय विद्यालय तथा अभिभावकमा समस्या हुने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता समस्याको निराकरण कसरी गर्ने ? यस्ता बालबालिकाको पहिचान कसरी गर्ने ? घर तथा परिवारका सदस्यमाझ, समाज तथा विद्यालयमा उनीहरुलाई कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्ने ? जस्ता विषय समावेश गरि मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपालले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
एसोसिएसनकी केन्द्रिय अध्यक्ष सुस्मा सुब्बा लामाको संयोजनमा अटिजम् केयर नेपाल सोसाईटीको सहकार्यमा अटिजम् सम्वन्धी जानकारी मुलक अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा अटिजम् केयर नेपाल सोसाईटीका अध्यक्ष डा. सुनिता मलेकु अमात्यले बालबालिकामा देखिने अटिजम् र बालबालिकाको हक, अधिकार लगायत समाज तथा विद्यालयको दावित्व बारे प्रकाश पारिन् ।
एसोसिएसनकी केन्द्रिय अध्यक्ष सुस्मा सुब्बा लामाले विगतमा संस्थाले मन्टेश्वरी शिक्षा प्रचारप्रसार लगायत विभिन्न जनचेतना मुलक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आईरहेको जानकारी दिँदै यस्ता कार्यक्रमले अटिजम् भएका बालबालिका पनि समाजका एक अभिन्न अंग हुन भन्ने प्रष्ट पार्ने बताईन् । साथै उनीहरुको मौलिक हकअधिकारको संरक्षण गर्नमा टेवा पुग्ने उनको भनाई थियो ।
सो कार्यक्रममा अटिजम् भएका बालबालिकाका अभिभावक मात्र नभई सदस्य विद्यालय, विद्यालय संस्थापक, प्रिन्सिपल, शिक्षकशिक्षिका लगायत उपत्यकाबाहिरबाट समेत गरि करीव २०० जनाले भाग लिएका थिए । सो अवसरमा सहभागी सबैलाई अध्यक्ष लामाले प्रमाणपत्र प्रदान गरिन् ।
ओम पार्क लुट माथि लुट कहिले सम्म छुट ?
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको खोलेखर्कमा ओम पार्कको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खुल्न आएको छ । पर्यटन
हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङका विद्यार्थीले मोदीको पुत्ला जलाएर गरे विरोध प्रदर्शन
काठमाण्डौं । भारतले नेपाली सिमा मिचेको विरुद्ध देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र
खानेपानी मन्त्री मगरको अर्को ठुलो महत्वकांक्षी योजना, मेलम्चीपछिको अर्को ठुलो खानेपानी आयोजना सुरु गर्दै
मकवानपुर (सिस्नेरी) । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्पका रुपमा उपत्यकाको ललितपुर जिल्ला क्षेत्रभित्र खानेपानी
उद्योगी व्यवसायी रुप ज्योति रिहा, मुद्धा नचल्ने भएपछि थुनामुक्त
काठमाण्डौं । उद्योगी व्यवसायी रुप ज्योति रिहा भएका छन् । उनीविरुद्ध मुद्धा नचलाउने निर्णय गर्दै